मलाई अगाडि घचेटे, पछाडि हेर्छु त कोही छैन ! आउनुस्, अध्यक्ष छाड्न तयार छु - Himali Patrika
मलाई अगाडि घचेटे, पछाडि हेर्छु त कोही छैन ! आउनुस्, अध्यक्ष छाड्न तयार छु
हिमाली पत्रिका १३ भाद्र २०७८, 7:15 am
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लामो समय आफूसँग रहेका तर नयाँ पार्टी गठनमा साथ नदिएका दोस्रो पुस्ताबारे मुख खोलेका छन् । उनले धोका शब्द त प्रयोग गरेनन्, तर आफूलाई घचेटेर अगाडि बढ् भनेको, तर पछाडि फर्किएर हेर्दा कोही नपाएको बताए ।
‘केपी ओली प्रतिगमनका वाहक हुन्, दक्षिणपन्थी भासमा भासिएका छन् । विदेशीसामु लम्पसार परेका छन् । त्यसैले जसरी पनि फाल्नुपर्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भन्थे’ उनले भने, ‘तयार नभएका शेरबहादुर देउवालाई तयार गर्न साथीहरु जानुभएको थियो । माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्नुभयो । उपेन्द्र यादवलाई त्यो विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।’
आफूहरुको संघर्ष पदको नभई विचार, सिद्धान्त, कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टीकै रुपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने भएको उनले सुनाए । उनले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी ओलीको पार्टीभन्दा फरक हुने समेत दाबी गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओली दक्षिणपन्थी भासमा गएको र दरबारिया, विदेशीबाट परिचालित तथा देशलाई टुक्र्याउन चाहने अवसवारदीसँग मिलेको उनको दाबी छ । अघि भने, ‘केपी ओलीजी सुध्रिनुस्, प्रतिगमनको क्रियाकलापप्रति आत्मालोचना गर्नुस् ।’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने, तर तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने समेत बताएका छन् ।
पार्टीको आधार बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै उनले भने, ‘माओवादीमा गएर मिल्छ कि भन्ने भ्रम नराखे हुन्छ । अरु कुनै पार्टीसँग तत्काल एकता गर्ने साेच छैन । अहिले यो पार्टीको आधार बलियो बनाउने छौं ।’
देशव्यापी संगठन बनाएर कार्यकर्तामा नयाँ उर्जा ल्याउने, वुथसम्म कमिटी बनाउने र एक कार्यकालपछि अध्यक्ष पदमा नबस्ने समेत उनले बताएका छन् ।